घरको यो दिशामा कहिल्यै सुत्नुहुँदैन विवाहित महिला, यस्तो छ कारण — Sanchar Kendra
१पक्राउ परेको केहि घण्टामै रिहा भए कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल
२वरिष्ठ नेता पौडेल गिरफ्तार परेपछि देउवाले दिए ओली सरकारलाई यस्तो कडा चेतावनी, के के भने ?
३थप १४९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
४कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गिरफ्तार, यस्ताे छ कारण
५कोरोना संक्रमण बढेपछि फेरी मंसिर २६ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय, तर यी क्षेत्रमा प्रतिबन्ध नलाग्ने
६आज पनि बढ्यो सुनको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
७पाल्पा र स्याङ्जाका दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु
८कैलाली प्रहरी ह’त्या प्रकरण- ८ जना जेल चलान
९प्रचण्डदेखि डराए ओली, हाइकमाण्ड बैठकअघि नै चाले यस्तो कदम
१०अन्तत: ओलीले चाले यस्तो ठुलो कदम, एक्कासी यस्तो निर्णय गरेपछि नेता कार्यकर्ता नै चकित
११किम जोङ उनले लगाए चीनले पठाएको कोरोनाविरुद्धकाे भ्याक्सिन
१२अमेरिकी पाठ्यक्रममा सच्याइयो बुद्धबारे गलत विवरण
घरको यो दिशामा कहिल्यै सुत्नुहुँदैन विवाहित महिला, यस्तो छ कारण
काठमाडाैँ । वास्तुशास्त्रका अनुसार घरका सबै दिशाहरु महत्वपूर्ण मानिन्छ। पश्चिम एवं उत्तरको बीच स्थित उत्तर-पश्चिम दिशालाई वायव्य कोण भनिन्छ। उत्तर-पश्चिम दिशाले हामीलाई दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं शक्ति प्रदान गर्दछ। यो दिशा व्यवहारमा परिवर्तनको सूचक हो।
यदि उत्तर-पश्चिम दिशा खराब भएमा मित्र शत्रु बन्छन्। यसको साथै उर्जा समाप्त हुन्छ। आयु क्षीण हुन्छ। जातकको राम्रो व्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ र घमण्डको मात्रा पनि बढ्छ। यदि तपाईको घरमा नोकर छन् भने उसको कोठा उत्तर-पश्चिममा हुनुपर्छ। घरको वायव्य कोणमा विवाहित महिला सुत्नुहुँदैन। यस दिशामा सुत्दा उनले अलग घर बसाउने सपना देख्न लाग्छन्।
त्यस्तै उत्तर-पश्चिम दिशामा कुमारी कन्या सुत्नुहुँदैन। त्यसले विवाहको योग मजबूत हुन्छ। शौचालयको लागि वायव्य कोण या दक्षिण दिशाको बीचको ठाउँ उपयुक्त हुन्छ। शौचालयमा प्यान यसरी राख्नुहोस् कि दिशा गर्दा तपाईकोमुख दक्षिण या उत्तर तर्फ फर्किओस्।
बच्चाको पढाईको लागि तिनको स्टडी टेबल, चेयर आदि उत्तर या उत्तर वायव्य कोणमै राख्नु पर्दछ। जबकी किताबको र्याक पश्चिम या दक्षिण दिशामा राख्नु शुभ हुन्छ। टेबल ल्याम सधैँ टेबलको दक्षिण-पूर्व दिशामा राख्नुपर्छ। उत्तर-पश्चिम दिशामा दोषको लागि एक सानो एक्वारियम स्थापित गर्नुपर्छ। जसमा आठ सुनौला माछा वा एक कालो माछा राख्नुहोस्। बल ल्याम सधैँ टेबलको दक्षिण-पूर्व दिशामा राख्नुपर्छ।
उत्तर-पश्चिम दिशामा दोषको लागि एक सानो एक्वारियम स्थापित गर्नुपर्छ। जसमा आठ सुनौला माछा वा एक कालो माछा राख्नुहोस्। बल ल्याम सधैँ टेबलको दक्षिण-पूर्व दिशामा राख्नुपर्छ। उत्तर-पश्चिम दिशामा दोषको लागि एक सानो एक्वारियम स्थापित गर्नुपर्छ। जसमा आठ सुनौला माछा वा एक कालो माछा राख्नुहोस्।
धर्म संस्कार सँग सम्बन्धित
यी ४ उपाय अपनाए मिल्छ सुख समृद्धि
यदी कसैको विवाह गर्न ढिलाई भएको छ ? हुनसक्छ यस्तो कारण
आज तिहारको चौथो दिन गाई-गोरू पूजा, म्हपूजा पनि आजै
बडादशैँको आज नवौँ दिन, दुर्गा भवानीको बिशेष गरी मनाइँदै
आज बडादशैँको सातौँ दिन, घरघरमा फूलपाती भित्र्याइँदै